Qaran Ma Nahay? - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Qormooyinka/Qaran Ma Nahay?
W/Q: Maxammuud Cali Geeldoon
Ujeeddada qormadani maahaa inaan ka hadlo taariikhda qarannima-doonka Soomaaliyeed (taa waxaa leh taariikhyahannada ku takhasusay iyo dadkii goobjoogga u ahaa ooy weli qaar noolyihiin). Qormadani waxay iga tahay isku-day aan isku deyayo bal inaan si kooban u fasiro qaraannima-doonka Soomaaliyeed (Somali nationalism ama القوميه الصوماليه) shalay iyo maanta, iyo waxa innagala gudboon inaynu maanta ka yeello.
1- Xilligii ay Reer Yurub sahansanayeen dhulka Soomaalida ooy qabaa’ilka la shirayeen, heshiisyana la gelayeen, ma jirey qabiil ama ruux is yiri Soomaali oo dhan u hadal?
2- Siday isu salsallaabaan jabkii Carabta ku yimi 1967-kii iyo jabkii Soomaalida ku yimi 1977-78kii, waase maxay saamayska ay ku kala yeesheen qarannimadii Carabta iyo qarannimidii Soomaalida?
Dawladkastoo maanta adduunka ka jirta waxaa lagu tilmaamaa “nation state,” ama “dawlad qaran,” taasoo macnaheedu yahay dawlad leh xuduud qeexan, dad dalkaa deggan oo lagu ogyahay, iyo awood u saamaxda inay dadkeeda iyo dalkeeda u taliso, xakamyna karto. Waa qaab-dawladeed ka duwan kuwii hore u jirey ee ku dhisnaa boqortooyada ama diinta. Waana qaab ay reer Yurub la yimaaddeen oo adduunka ku fidiyeen. Maanta Xajkii Rabbi waajibka kaaga dhigay haddaad gudanaysao waa inaad oggolaansha ka haysataa Dawladda Sucuudiga. Wiil xarragoonaya ayaa qalin kuugu diidi kara ama kuugu oggolaan kara. Maxaa taa keenay? Ma tihid muwaadin Sucuudi ah. Ma aha mid tala laynaka wediiyeey. Waa qaab ay Reer Yurub doorteen oo u hirgalay, adduunka intiiisa kalena sanka kaga toleen. Waana qaab aynaan maanta meella ka mari karayn haddaynu Soomaali nahay. Saa daraaddeed, waxaynaan ka fursanayn inaynu soo qufno, taariikh koobanna ka bixinno, say “nationalism” (qarannimo ama qarannima-doon) Yurub ugu abuurantay si aynu macnaheeda iyo tilmaameheeda wax uga ogaanno.
Horumarkii ay Reer Yurub gaadheen ilaa dhowrkii boqol ee qarni ee aynu soo dhaafnay ayaa isbeddel xoogle ku keenay bulshooyinkooda dhaqan ahaan, fikir ahaan, iyo qaab-dhismeedka bulshada. Dadku waxay u hoggaansami jireen hadba Boqortooyadii ay hoos joogeen, ama waxay toos u hoos iman jireen Kaniisadda Katoolika (Catholic Church), luqadda ay dadka yaree aqoonta lihi baran jireen oo ka sinnaayeenna waxay ahayd Latin. Madbacaddu markay soo baxaday, ayaa kutub aad u fara badan lagu daabacay afka Laatiinka ooy dad yari yiqiinneen, muddo ka bacdina waxaa lagu daabacay luqooyin kala duwan ooy dadka caammada ahi ku hadli jireen. Afafka la daabacay ayaa waxay keeneen inay isku xidhmaan dad isku af ah horese aan isugu xidhnaan jirin. Halkaa waxaa kaaga muuqanaya saddex woxood oo kulmay: 1) madbacadda oo ahayd farsama cusub; 2) malqabeenna aad uga macaashay daabicidda kutub cusub, kuna daabacay afaf kala duwan; 3) dadyow afaf kala duwan ku hadla oo qola kasta goonnideed uu afkeedu isugu xidhay. Waxaa abuurmay beelo inkastoo aanay si dhab ah aqoon isugu lahayn haddana si maanka-arag ah isu og una wada socda (imagined communities)1 .
Qarannimada Reer Yurub qarnigii 19aad ayaa laba loo kala fasiray: mid ku salaysan rabitaan iyo mid ku salyasan dhaqan, iyo/ama af, iyo/ama dhiig. Tan hore waa tan ay France iyo USA iyo Britain ku dhaqmeen, tan kalena waa tan ay Germany iyo Italy iyo dalalka “Slavs” laysku yiraahdo ee Bariga Europe ay ku yagleelmeen. Tan hore waxaa fasiray aqoonyhannada ay ka midka yihiin John Stuart Mill iyo Earnest Renan, tan danbena Johann Herder, Giuseppe Mazzini iyo kuwa kale. Tan hore waxay ku timaaddaa kacdoonno ama isbeddello ay horkacaan dabaqadda dhexe iyo dabaqadda sare (Bourgeoisie), isbeddelladaasoo ay keenaan horumarka ay bulshooyinkaasi gadheen. Tan danbese waa falcelis lagaga hortegayo faragelin ka timaadda xoogag qalaad, ha ahaato mid maskaxeed ama mid hubaysan. Tan hore waxaa lagu doonaa hay’adaha loo yaqaan “liberal institutions,” (hay’ada dawldeed oo madaxbannaan), tan dambena waxaa lagu raadshaa madaxbannaani iyo dawladnimo2. Labada tafsiroodba waxaan ka madhnayn ooy iskaga mid yihiin dareenka iyo aragtida siyaasadeed ee dad isku tola kana yeela “nation.”
Waxaa xusid weyn mudan in dareenka ama maan-ka-aragga qarannimo aanu iska abuurmine ay sida dhirta u beeraan oo u waraabiyaan indheergaradka bulshadu. Indheergaradka ayaa u tafa xayta dadaal-maskaxeedka isku xidha dadaan hore isugu xidhnayn iyagoo taariikhda ka naqaysanaya qaybahay ka rabaan ee dadkooda midaynaya, qaybaha xagaldaacinaya halgankoodana iska tuuraya3. Waxaana laba daraadle yagleelidda qarannimada kaalin mug leh ka qaata maansoolayaasha bulshada. Tusaale ahaan, Armenians-ka oo ah dad qarniya badan kala filiqsanaa waxaa isuhiloobiddooda qayb weyn ka qaatay gabay la tiriyey horraantii qarnigii 19aad, gabaygaas oo loo yaqaan Ter Getzo (Lord sustain the Armenian people!)4. Iyana markii Poland ay Russia iyo Austria iyo Prussia saddexda u kala goosteen, ooy reer Poland quusta gaadheen, dabayaaqadii qarnigii 18aad, dadka Polish-ka ahi waxay wehel bideen, qulubtoodana yididdiila gelisey, heesta “We Shall be Poles Again.”5 Waynu ka dheregsannahay heesta Soomaaliyeey toosoo iyo kaalintay halgankii gobannimaddoonka ku lahayd. Iyana, inteenna soo baratay gabayadii Carbeed, waxaynu xasuusannahay gabaygii caanka ahaa ee إذالشعب يوماأراد الحياه ee uu tiriyey gabayaagi أبوالقاسم الشابي ee Tuuniisiga ahaa. Taariikhda ummadaha maansoolayaahsu meel halbowle ah bay kaga jiraan. Saasoo kale, iyana mufakiriinta kalee ee bulshadu qayb weyn bay ka qaataan wacyigelinta, baraarujinta, iyo jihaynta bulshada.
Wuxuu xaalku sii qasmay marka, xilligii Dagaalkii Koowaad ee Caalamka, ay Great Britain adeegsatey tab ay Carabta ugu kiciso dawladdii Turkiga, iyadoo Carabta ugu ballan qaadday inay madaxbannaanidooda helayaan. Waxayse taasi ahayd khiyaano aad u weyn. Markii Dawladdii Turkiga laga guuleeystey, Carabtii dhinaca Aasiya (Asia), halkii ay ka filyeen madaxbannaani, waxaa u tashaday France iyo Great Britain, Filisdiinna waxaa loo fasaxay Yuhuudda. Laba dhaqdhqaaq oo baaxadle ayaa soo baxay: mid ku dhisan Islaamka iyo mid ku dhisan qarannima-doonka Carabta (القوميه العربيه). Dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah waxaa hormuud u noqday الإخوان المسلمون, dhaqdhaqaaqa kalena waxaa hormuud u noqday saraakiil Carbeed oo Ciidammada Turkiga ka tirsanaan jirey iyo Masiixiyiinta Suuriyada Weyn (Suuriya iyo Lubnaan). Fikir ahaan shakhsiyaadka ugu magaca weyn fikirka ku dhisan Carabnimadu waa سا طع الحصري iyo ميشيل عفلق. Dawlad ahaanna waxaa siyaasdda Carabnimada ku dhisan mabda’ siyaasadeed ka dhigtay Xukuumaddii Jamaal Cabdannaasir ee Masar iyo Xukuumadihii Bacthiyiinta ahaa ee Suuriya iyo Ciraaq (الأنظمه البعثيه). Si kastaba ha ahaatee, waxaa la yiraahdaa القوميه العربيه waxaa dhabarjab ku noqday jabkii Carabta ka gaadhey dagaalkii 1967-kii ay Israel la galeen, jabkaasoo gilgiley aamminaaddii ay shucuubta Carabtu dawladohooda ku qabeen6. Waxayna u egatahay in labadii dagaal ee uu Maraykanku ku qaaday Ciraaq iyo cawaaqibkii ka dhashay ay wixii la oran jirey القوميه العربيه israaciyeen.
Ingiriis, Amxaar iyo Talyan way akaakimiye… Waa duni la kala iibsadaan nala ogeysiinne
Qarannima-doonka Soomaaliyeed wuxuu si fiican u hanaqaaday una qeexmay Dagaalkii Labaad ee Adduunyada ka dib, markay Qarammada Midoobey hor timi masa’ladda sidii laga yeeli lahaa dhulka Soomaalida, ee Jabuuti mahee inta kale uu Ingiriis gacanta ku wada dhigay, SYL-na ay u muuqatay fursad ay Soomaali oo dhammi ku midoobi karto, dawladnimona ku hanan karto. In kastoo aanay SYLhadafkaa ku guuleeysan, haddana waxaa hollintaa ku abuurmay fikirka Soomaaliweyn, kaasoo noqday himilada midaysay, bartilmaameedna u noqotay, qarannimada Soomaaliyeed. Waxayna taasi ku timi markay SYL aragtidaa ku fidisay carrada ummada Soomaaliyeed oo dhan. Saasoo ay tahay, qarannima-doonka Soomaaliyeed kama baxsan nuqsaanta (ama nusqaanta) lagu sheego qarannima-doonka ummadaha loo yaqaan Caalamka Saddexaad oo dhan, taasoo ah in qarannima-doonka Soomaaliyeed uu ahaa shisheeya-iska-dhicin keliya ee aanu ahayn mid ku salaysan baraarug maskaxeed iyo ku-dhaadashada tilmaamaha togan ee qaranka Soomaaliyeed toonna7.
i)in Soomaaliya ay hoy u noqoto Soomaali oo dhan, meeshay doonaanba ha ku dhasheene;
ii)in manhajyadii dugsiyada iyo suugaantii dadweynaha laysku xusuusiyo inay dhulal Soomaaliyeed xaq-darro ku maqan yihiin;
Waxaan aamminsanahy in qalbijabkaa Carabta ku dhacay 1967-kii midaan ka yarayni uu ku habsadey ummadda Soomaaliyeed 1978-kii markii ay caddaatay in dagaalkii lagu guuldarraystay, himiladii Soomaaliweyna ay faraha ka baxday, wixii naf, maal, iyo qalab loo hurayna ay khasaaroobeen. Qarannimadii Soomaaliyeed ee ku dhisnayd fikradda Soomaliweyn wax, hadday taasi suurtageliweydo, caymis u noqda ooy dib ugu soo degto hore looma diyaarin. Mar keliyay habaq tiri oo dhulka ku soo dhacday!
Sidaan u aamminsanahay xaqa ay reer Filstiin u leeyihiin dawlad madax bannaan ayaan u aamminsanahay Soomaaliweyn. Markaanse siday wax u dheceen dib u jalleeco, waxaa ii cad inay dawladaha Carbeedna ku qaldanaayeen inay qarannimadii Carbeed ku xidhaan xoraynta Filisdiin, dawladdii Soomaaliyeedna ay ku qaldanayd inay qarannamidii ummadda Soomaaliyeed ku xidho xoraynta dhulalka maqan. Shucuubta waxaa la gudboon inay waxay xaq u leeyihiin laabta iyo maanka ku hayaan oo himilo ka dhigtaan. Dawladahana waxaa la gudboon inay siyaasad iyo dhaqan run iyo caqli ku dhisan yeeshaan oo adeegsadaan.
Ololahan dib-u-soo-celinta dawladdii Soomaaliyeed loogu jiraa meel buu iska qabsan la’yahay: Waxaa la dhisayaa dawlad qabaa’il; lama dhisayo dawlad qaran. Taariikhduna waxay dhigaysaa in qabaa’ilka dhaqanka reer miyiga lihi ay dawladnimo ka dheertahay. Dhibtu waxay tahay iyadoo uu shisheeyuhu gacan weyn ku leeyahay dawlad-dhiska haatan Soomaaliya ka socda. Shisheeyena qarannima Soomaaliyeed kama shaqaynayo, sidaanu Maraykan uga shaqayn qarannimadii reer Vietnam, reer Afqaanistaan, iyo reer Ciraaq toonna, taasoo keentay inuu ku guul darraysto dawlad taabbagal inuu dalalkaa ka dhiso. Qarannimo sideedaba ummadday isku toshaa, shisheeyana way isaka caabbidaa. Marka, shisheeye dantiisa wataa qarannimo isaga fogeysa kuguma dhiiri gelinayo, si kastooy u tahay waxaadan ka maarmayn. Dawaladnimona kuu tolmi mayso qarannima la’aan.
Soomaalidu waa ummad ay taariikh badani ka luntay, af Soomaaliga oon qoraal lahaan jirin dartiis. Waxaana taarikhdaa innoo caddaynaya waxay Soomaalidu ka dhaxleen dadkii ay ka soo xaydeen: diinta Islaamka, dhul baaxad leh, qorqorriinsha isu eg, af ay ku wada hadlaan, iyo dhaqan is wada shaabaha. Intaasoo dhammi ma suurta galeen haddii aanay Soomalidu lahayn taariikh midaysa. Qabiilna degaankiisa ma degganaan kareen haddii aanay qabaa’ilka kale jirin. Gabbaad baa laysu wada ahaa; diin iyo af iyo dhaqan iyo dhiig baa la wada ilaashan jirey, waana laysku wada tiirsnaa. Waxaanayse Soomaalidu wada lahaan jirin tala midaysa iyo dawladnimo ay wada haweystaan, taas ayaana keentay in la kala googoosto xilligii Isticmaarka.
9- Dawladda waxaa saaraan badaadinta Soomaaliya iyo inay ka ilaaliso wixii burburin kara.
Benedict Anderson, Imagined Communities, Verso, p. 44.
Bassam Tibi, Arab Nationalism Between Islam and the Nation-State, McMillan Press LTD, p. 131.
Michael D. Kennedy and Ronald Grigor Suny, “Introduction” in Intellectuals and the Articulation of the Nation, The University of Michigan Press, p. 2.
Kachig Tololyan, “Textual Nation: Poetry and Nationalism in Arminean Political Culture” in Intellectuals and the Articulation of the Nation, The University of Michigan Press, p. 80.
Andrzej Walicki, “Intellectual Elites and the Vicissitudes of ‘Imagined Nationn’ in Poland” in Intellectuals and the Articulation of the Nation, The University of Michigan Press, p. 270.
Bassam Tibi, Arab Nationalism Between Islam and the Nation-State, McMillan Press LTD, p. 214.
Saadia Touval, Somali Nationalism, Harvard University Press, p. 61.
Qaran Ma Nahay W/Q: Maxammuud Cali Geeldoon